I-MANN 8S: Iimpawu, iiNkcukacha kunye neXabiso | I-Androidsis
Emva kwengcaciso yakutsha nje ye-new I-Huawei Mate 20 kunye nezinye izixhobo, i-MANN, enye imveliso yefowuni, isungule i-terminal ukuze ithathe indawo ephambili namhlanje. Sithetha ngayo IMANN 8S, i-smartphone erhabaxa eza neenkcukacha ezinomdla kunye neempawu ukuba into esiyifunayo siselfowuni enokumelana nayo yonke into, nkqu namaqondo obushushu aphezulu naphantsi.
Le ayisiyi "fowuni engenakonakala" kuphela, kodwa ikwayiyo enikwe nezinye iinkcukacha. Esi sixhobo iza neprosesa yoluhlu lweQualcomm 600, ke inamandla okuqhuba uninzi lweeapps. Yazi!
El IMANN 8S Inoyilo lwamacala asibhozo esiye sabona uninzi lwee-smartphones ezirhabaxa ezamkela macala onke. Iikona zigqunywe ngerabha eshinyeneyo kwaye kukho iGililla yeGlilla kumacala omabini, yomelele. Umvelisi uthi unokuphila ngokuwa okuninzi ukusuka kwi-8 yeemitha ukuphakama ngaphandle kwengxaki.
Isiphelo sisebenzisa i Isikrini se-AMOLED se-5.5 intshi ye-FullHD + isisombululo se-1920 x 1.080 pixels. Inikwe amandla yiprosesa ye-Snapdragon 653, enye yee-chipset ezingasetyenziswanga kakhulu zeQualcomm. Lilonke, ithwala i-6 GB ye-RAM, i-64 okanye i-128 GB yendawo yokugcina, umfundi ongasemva weminwe kwaye, ngelishwa, i-Android 7.1.2 Nougat efakwe ngaphambili, ngokungabikho kwenguqulo ye-Oreo.
I-MANN 8S inekhamera yangaphambili ye-16 MP (f / 1.8) kunye ne-386 MP ezimbini ze-Sony IMX12 zekhamera zangasemva ezinokubona indawo, i-HDR kunye nemowudi yasebusuku. Kwelinye icala, ifowuni ine-6.000 mAh ibhetri yesikhundla kunye nenkxaso yokutshaja umva kunye nokutshaja ngokukhawuleza kwe-3.0. Le yokugqibela ikuvumela ukuba uyihlawulise ukusuka kwinto engenanto ukuya ngokupheleleyo kwiiyure nje eziyi-2.5. Ngaphaya koko, iMANN ineqhayiya ngesiqinisekiso se-IP68 kwaye inokuphinda isinde kumaqondo obushushu (i-30 ° C ukuya kwi-60 ° C).
Ifowuni iza ngombala weCold Gold Ixabiso lentengo kwi-2.299 yuan (~ 290 euros) yemodeli engama-64GB kunye ne-2.599 yuan (~ 325 euros) yenguqulo ye-128GB. Iyafumaneka ngoku ukuba ithengwe kwi-JD.com.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-MANN 8S: Uluhlu olutsha oluphakathi oluxineneyo luthatha intengiso
Uyivula njani iWindows PC yakho kunye nesenzwa yeminwe yeselfowuni yakho ye-Android